Blood Window [VIRUS] — MYSTERY ZILLION
Blood Window [VIRUS]
July 2008 edited September 2008 in Antivirus & Virus
Blood Window Virus...:61:
အဲဒီ virus ကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျ။
တခုခု run လိုက်တိုင်း screen တခုလုံး အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။
အဲဒီ Virus ကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျ။တခုခု Run လိုက်တိုင်း Screen တခုလုံး အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။သိတဲ့သူများဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါအုံးဗျာ။:63::63::63:computer နှစ်လုံးထိသွားပြီ။
ဆရာ ကိုဇူးလူးနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ဘူးတယ်.. သူနဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ပါဗျာ..
Xp ပေါ်မှာလာ ခင်ဗျာ..
ဟုတ်ပ ကိုဇူးလူး spy emergency နဲ့ကစ်လိုက်တာထင်တာဘဲ .. MZ ထဲမှာ တွေ့ဘူးတယ် အနီရောင်ဖြစ်သွားတာ :P
ကျွန်တော်ကြောက်လို့ ကိုMrDBA နှင့် ကိုဇူး ကျေးဇူးကြောင့် spy emergency လေတင်လိုက်တယ်..
အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းသုံးပြီ ကာကွယ်ထားမှ .အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ချစ်သော iceos
ဟုတ်ကဲ့ အခုတော့ spy emergency 2008 တင်ပြီး scan လုပ်ထားပါတယ်။
ရမရ ပြီးတော့မှပဲ ပြောပါ့မယ်။
ကျနော့်ဆီမှာလည်း Blood Windows ဖြစ်သွားဘူးတယ်။
အဲဒီတခုဘဲဆိုရင် Spy Emergency နဲ့ အိုကေသွားတယ်။ ပျောက်သွားပါတယ်။ အချို့စက်တွေမှာ အားလုံး အိုကေသွားတာဘဲ။
သို့သော် အချို့စက်တွေမှာကျတော့ Blood Windows တခုတည်းမကဘဲ အခြားတွေပါ ရောပါလာလားမသိဘူး။ HDD Secondary လုပ်ပြီး ရှင်းတာလည်း Windows No Disk စာတန်းပေါ်ပြီး ဘာအလုပ်မှလုပ်လို့မရဘူး။
ဒါနဲ့ အဲဒီစက်တွေကိုတော့ လုံးလုံး ဖော်မတ်ချလိုက်ရပါကြောင်း သတင်းမကောင်း ပါးလိုက်ပါသည်။
Window No Disk တော့ မပေါ်ဘူးဗျ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို Window -Drive Not Ready ကြီးပေါ်တာတယ်ဗျ။ cancel နှိပ်လိုက်ရင်လဲ Windows ထဲကိုတန်းရောက်သွားတယ်ဗျ။
It is easy but very busy for solve this problem.u should check every folder.if u fine the abnormal folder can delete
zaw.sysadmin wrote: »
Yes,I know..but I can't click that folder ..
BTW..thanks for your advice zaw.sysadmin..:1::1::1:
restart your computer n then try to make with safemode.There are many folders in sys32,window,desktop.(there is banormal,eg:speaker with folder)If u find these folder do this for delete.And then try to normally for window.OK!It is my experience.Sorry for Myanmar font,i cannot type.
:Orestart your computer n then try to make with safemode.There are many folders in sys32,window,desktop.(there is banormal,eg:speaker with folder)If u find these folder do this for delete.And then try to normally for window.OK!It is my experience.Sorry for Myanmar font,i cannot type.:103:
ကျွန်တော့်စက်နှစ်လုံးမှာ blood windows ဆိုပြီးပြတယ် ၊ ပြီးတော့ windows no disk ဆိုပြီး drive ပေါ်လာတယ် cancel လည်းမရ ၊ continue လည်းမရ Taskbar မှာလည်း မှိတ်လိုက် လင်းလိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာအလုပ်လုပ်နေတယ် ၊ screen တစ်ခုလုံးလည်း color တွေပြောင်းနေတယ်၊
folder တွေကလည်း music icon လေးနဲ့ တီးလုံးသံလေးလည်း ကြားရတယ် ၊ kasper လည်းမနိုင် avastလည်းမနိုင် ၊ avastမှာတော့ W32/Hakaglan.worm ပြတယ်ဗျ။ kasper မှာတော့ Worm.Win32.AutoIt.e ။ windows မချဘဲ ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲ မသိဘူး သိတဲ့သူများ ကူညီကြပါဦးဗျာ...
May I know this virus effect on window vista. Can Spy emergency run on window vister?
I think this virus is slave effect of one misscall virus or svchost!
July 2008 edited July 2008 Registered Users, Moderators
blood windows ကိုတော့ spy emergency နဲ့နိုင်တယ်လို့ကိုဇူးလူးပြောထားပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ windows no disk လို့ပေါ်တာ svchost.exe ဆိုတဲ့ Virus ၀င်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Taskbar မှာလည်း မှိတ်လိုက် လင်းလိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာအလုပ်လုပ်နေတယ်
အဲဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်လဲဒီနေ့မှထိတာ Star Lay ပေးထားတဲ့ ဒီ ဆော့၀ဲလ်လေးသုံးပြီးတော့ restart ချလိုက်ပါ။ window ပြန်တက်လာရင် အဲ အဲဒီအကြောင်းမပြောခင် autoruns ဆော့၀ဲလ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ Virus သတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့အမြဲအသုံးချတယ်။ အဲဒီ autoruns လေးကို run လိုက်ရင် winomc ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ run နေတာလေးကိုရှာကြည့်ပါ။ တွေ့ရင် delete နဲ့ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ctrl+alt+del ကိုနှိပ်ပါ။ process ထဲက svchost.exe ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ run နေတာတွေတွေ့ပါမယ်။ ဘယ်ကောင်ကို end process ပေးရမလဲဆိုရင်တော့။ မပေးရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောပါမယ်။
Local Service မှာ run နေတဲ့ svchost.exe
Network Service မှာ run နေတဲ့ svchost.exe
System မှာ run နေတဲ့ svchost.exe
စတာတွေကို end process မပေးရပါခင်ဗျာ။ ကျန်တဲ့နေရာကတော့ ကျွန်တော်တို့ window တင်ရင်ပေးထားတဲ့နာမည်မှာ svchost.exe ဆိုတာကို end process လုပ်ရပါမယ်။
ပြီးရင် hidden files ဖော်ထားရပါမယ်။ hidden files ဖော်ဖို့က folder options => View အောက်က
Show Hidden Files and Folder ကို ရွေးပါ။ အောက်နည်းနည်းထပ်ဆင်းပါ။
Hide Protected Operating System File (Recommended) ကိုအစက အစိမ်းလေးပေးထားပါတယ်။ ဖြုတ်လိုက်ပါ။ yes or no မေးရင် yes ရွေးလိုက်ပါ။
အခု window တင်ထားတဲ့ partition c:\_windows အောက်က autorun.inf ဆိုတဲ့ File ကိုဖျက်ပါ။ ပြီးရင် c:\_window\_system32\_restore အောက်က svchost.exe ဆိုတာရယ် data ဆိုတာရယ်က မှိန်နေပါတယ်။ ဖျက်ပါ။ ပြီးတော့ c:\_window\_system32 အောက်မှာ del.exe, dir.exe ရယ်ဆိုတာလဲမှိန်နေပါတယ်။ အဲဒီ ၂ခုကိုလဲဖျက်ပါ။
ကျွန်တော်အထင် c:\_windows အောက်မှာ တီးလုံးပုံစံလေးတွေနဲ့ folders တွေအများကြီးရှိမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီကောင်တွေကိုလဲဖျက်ပါ။ partition ခွဲထားတဲ့ drive တိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထိတာတော့ တချို့ program software တွေကိုပါ ဒီ virus ကဖျက်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပြုချင်တာက c:\_program files ဆိုတာကို right click နှိပ်ပြီး search နဲ့ရှာပါ။ search box ထဲမှာ *.exe ဆိုပြီးရိုက်ရှာကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ တချို့ဆော့၀ဲလ်တွေကို virus ကိုက်ထားလို့ တီးလုံးပုံပါတဲ့ folder လေးတွေပြောင်းနေတာမြင်ရပါမယ်။ အဲဒါတွေကိုမှတ်ထားပြီး အဲဒီဆော့၀ဲလ်လေးတွေ Install ပြန်လုပ်ပေးပါ။
စတဲ့ ဆော့၀ဲလ်တွေကိုအကိုက်ခံလိုက်ရလို့ပြန်တင်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ Virus သတ်တာပြီးသေးဘူးဗျနောက်တဆင့်ကျန်သေးတယ်
win+r နှိပ်ပါ။ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ registry editor တက်လာပါမယ်။ ctrl+F နှိပ်ပါ။ winomc လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ ရှာလို့တွေ့ရင် del နဲ့ဖျက်ပါ။ ctrl+F ထပ်နှိပ်ပါ။ svchost လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ အဲဒီမှာရှာပေးပါလိမ့်မယ်။ data ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသေချာကြည့်ပါ။
C:\_WINDOWS\_system32\_svchost.exe ဆိုရင်မဖျက်ပါနဲ့ ။
အဲလိုနေရာမျိုးတွေမှာတွေ့ရင်ဖျက်ပါ။ ပြီးရင် restart ပြန်ချပါ။ ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီထင်ပါတယ်။
အကိုဒို့ရေ အကိုဒို့ပြောတဲ့ Virus ကို Bkav နဲ့သတ်ကြည့်ပါလား။
Run ရတာလဲပေါ့တယ်ဗျ ။
သူကိုယူချင်ရင် www.bkav.com.vn ကို၀င်
Download မှာ Click နှိပ်
ပြီးရင် Pro ကိုရွေး
Pro သုံးခုမှာအောက်ဆုံး Pro ကိုရွေး
Form မှာဘာမှဖြည့်စရာမလိုဘူးနော် ။
Full Version တော့အနော်လဲသုံးနိုင်သေးဘူးဗျာ။
Good Luck4You :101::101::101::101::101:
No problem for tying in Myanmar Fonts .I found folder with speaker..Thanksalot for your advice.:1:
ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီ virus ထိဖူးပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲ့ဒီ virus ကဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အသေးအမွှားပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တုန်းက အဲ့ဒီလောက် အလုပ်မရှုတ်ပါဘူး။ အားလုံးလည်း သိအောင် နည်းလမ်းလေး ဝေမျှပါမယ်။ Format ချလိုက်တာပါ။:))နောက်ထပ် အကူအညီလိုရင်လည်း ပြောပေါ့။:101:
တော်တော် ကောင်းတဲ့နည်းပဲ.... :d